जसपामा उपेन्द्रविरुद्ध बाबुरामको मोर्चाबन्दी, बहुमत सांसद भट्टराईतिर, नयाँ पार्टी बनाउने तयारीNepalpana - Nepal's Digital Online
शनिवार, मंसिर १८ गते २०७८
२०७८, मंसिर १८ गते
# राजेन्द्र पाण्डे
जसपामा उपेन्द्रविरुद्ध बाबुरामको मोर्चाबन्दी, बहुमत सांसद भट्टराईतिर, नयाँ पार्टी बनाउने तयारी
नेपालपाना आश्विन ६ २०७८
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालमा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध मोर्चाबन्दी कसेका छन् ।
पार्टी उपेन्द्र एकलौटी हिँडेको, यादवहरुलाई मात्र च्यापेको र प्रचण्डको एजेण्डाको पछाडि लागेर वैकल्पिक शक्ति बन्ने भनेर पार्टीलाई पेण्डुलम बनाएको भन्दै बाबुरामले मोर्चाबन्दी थालेका हुन् ।
पछिल्लो समय बाबुराम पार्टीमा बलियो बन्दै गएका छन् । बाबुरामको पक्षमा बहुमत सांसद रहेको नेताहरु बताउँछन् ।
बाबुराम र उपेन्द्रबीच दुरी बढाउने काम पनि सत्ता गठबन्धनबाटै भएको छ । बाबुराम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पक्षमा छन् भने उपेन्द्र प्रचण्ड र माधव नेपालको पछि लागेका छन् ।
अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीमा पनि यहीँ अवस्था देखियो । पहिला एमसीसीको पक्षमा रहेका उपेन्द्र अहिले प्रचण्डको पछि लागेर विरोध गरिरहेका छन् । जबकी प्रचण्डकै पालादेखि एसमीसी नेपालमा ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।
प्रचण्डजस्तै उपेन्द्रले पनि द्वैध चरित्र देखाएपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको एक नेता बताउँछन् । बाबुराम निकट ती नेताका अनुसार एमसीसीमा बाबुराम र उपेन्द्रबीच चर्को मतभेद छ । त्यसका अलावा अन्य विषयमा पनि उपेन्द्र एकलौटी अघि बढ्न खोजेपछि धेरै सांसद असन्तुष्ट छन् ।
अहिले उपेन्द्रसँग असन्तुष्ट भएर बाबुराम कित्तामा उभिएका सांसदहरुमा उपेन्द्रकै खास इस्तियाक राईदेखि रानी मण्डलसम्म छन् । अन्य सांसदहरुमा राजकिशोर यादव, प्रमोद साह, नरमाया ढकाल, रानी मण्डल, अमृता अग्रहरी र रुही नाज रहेका छन् ।
ती नेताका अनुसार उपेन्द्र नसच्चिए बाबुरामले नयाँ पार्टी खोल्नुपर्नेमा छलफल थालेका छन् । बाबुरामसँग रहेका सांसदहरु यसमा सहमत छन् । उपेन्द्रकै कारण सरकारमा जान नपाएको, ७२ दिनमा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेको उनीहरुको ठहर छ । आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि मुलुकलाई नै बन्धक बनाउन नहुने र परिआए विभाजन गरेर भए पनि निकास दिनुपर्नेमा बाबुराम समूह छ ।
एमसीसी देश विकासको परियोजना भएकाले यसलाई अगाडि बढाउन सघाउनुपर्नेमा बाबुराम समूह छ । सांसदहरुको मत पनि यहीँ छ । तर उपेन्द्र प्रचण्डको पछि लागेर विरोध गर्न थालेपछि पार्टीभित्र विद्रोहको वातावरण बन्दै गएको हो ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त गर्ने दिवा स्वप्न नदेख्न उपेन्द्र यादवको चेतावनी
साझा र विवेकशील एकीकरण हुँदा बाबुरामले भने, ‘भेडा भेडासँग र बाख्रा बाख्रासँग’
मधेसमा चीनको 'खतरनाक' मिसनका नाइके बन्दै उपेन्द्र यादव, ४ करोड लिएर ओलीविरुद्ध यति ठूलो षडयन्त्र !
कहाँ छ उपेन्द्र यादवलाई चीनबाट आएको करोडौं पैसा? अपार्टमेन्टसहित मध्यस्थकर्ताको यस्तो छ नालीबेली!
आश्विन ६, २०७८ बुधवार १४:२४:५६ बजे : प्रकाशित
देउवा र ओलीको एउटै भाषण, रातारात बढायो सम्भावना
ईश्वर निन्दाको आरोपमा पाकिस्तानमा श्रीलंकन नागरिकलाई आगो लगाई मारियो, विश्वभर निन्दा
कांग्रेस अधिवेशन : पर्सामा देउवा पक्षको एकलौटी, सबैतिर संस्थापन पक्ष आउँदा पौडेल प्यानल बढारियो
देउवालाई सिटौलाको स्पष्ट साथ, मिलेर पौडेल-कोइरालालाई बढार्दै
प्रधानमन्त्रीको नयाँ घोषणा, कांग्रेस नेता कार्यकर्ता उत्साहित
शंकर पोखरेललाई मेटमणि चौधरीले झारे भुँईमा, आफसँग चुनाव लड्न दिए चुनौती
सोमवार भारत आउँदै पुटिन
गगन थापाकाे बाेलीले एमाले तरंगीत, 'वितण्डा मच्चाउनेविरुद्ध काँग्रेस लड्ने'
नारायणकाजी भन्छन्- एमाले विचलित बन्यो